မြန်မာ့တန်ဖိုးကို ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုမြှင့်တင်ကြမလဲ - Myanmar in Singapore
မြန်မာ့တန်ဖိုးကို ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုမြှင့်တင်ကြမလဲ
Posted by Admin Team on July 18, 2010 at 10:29pm in မြန်မာအကြောင်း၊ မြန်မာသတင်း
Please share your knowledge, experiences and opinions... Tags:
Permalink Reply by nay myo oo on July 19, 2010 at 9:28am NO IDEA FOR THAT,BUT DEPEND ON YOU.
Permalink Reply by kyawmyo on July 19, 2010 at 10:25am ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်ကိုတိုင်မြှင့်တင်ရမှာပါ။ မြန်မာတွေကိုယ်စီ ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်စီမြှင့်လာမှ မြန်မာ့တန်ဖိုးကလည်း မြင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်တန်ဖိုး ကိုယ်ကိုတိုင်မြှင့်မယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုတန်ဖိုးတွေကို ရှိအောင်မြှင့်ကြမလဲ။ လူအချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါ ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေနဲ့ ဆက်ဆံရမယ်။ မတော်လောဘတွေဖြစ်လာရင် သတိနဲ့ထိန်းနိုင်ရမယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကို အသက်ပမာမြဲမြံအောင် စောင့်ရှောက်ရမယ်။ အရာရာမှာစည်းကမ်းရှိရမယ်။ အပြုသဘောဖြစ်ချင်စိတ် ပြင်းထန်ရမယ်။ ကြိုးစားချင်စိတ် လုံ့လ၊ ၀ီရိယရှိရမယ်။ အသိပညာ-အတတ်ပညာတွေ တိုးပွားလာအောင် လေ့လာရမယ်။ သမာအာဇိဝနဲ့ရတဲ့ငွေကို ရှာနိုင်သမျှ များများရှာနိုင်ရမယ်။
Permalink Reply by TUN TUN WIN on July 19, 2010 at 10:23pm Every sunday should be go Informatics Campus, 12 Science Center Rd, S609080. Myanmar were valuable.
Permalink Reply by YE AUNG on July 20, 2010 at 10:49am We should have to try our best each other, not only for own life.
As far as my experience that our education, ability, attitude, manner and intelligent, etc... are better than other nationality.
Permalink Reply by Smile Angel on July 20, 2010 at 11:22am အရေးကြီးတာစည်းကမ်းရှိဖို. မပျင်းမရဖို. အလကားနေ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ထိုင် ဘောလုံးပွဲ နှစ်လုံးသုံးလုံး အိမ် က မိန်းမ မကောင်းကြောင်း ဘာညာသာရကာ ပြောတာတွေ လျှော. ကြိုးစားချင်စိတ် မရှိတာလဲပါတယ် မိန်းကလေး တွေကလည်း လျှပ်ပေါ်လော်လီ တာတွေ မလုပ်နဲ. မြန်မာ တွေ အောက်တန်း ရောက်ကုန်မယ်
Permalink Reply by kyaw thu on July 20, 2010 at 4:14pm အမျိုးချစ်တတ်ရမယ်တိုင်းတပါကိုအထင်းကြီးတဲစိတ်တွေဖယ်ရှာပြစ်ရမယ်
Permalink Reply by Thantzinwin on July 20, 2010 at 11:14pm all said right..myanmar people should maintain own character individually ........should try to improve more day by day....
Permalink Reply by ko po naing on July 25, 2010 at 8:27pm မကောင်းမှုရှောင် ကောင်းမှုဆောင် ဖြူအောင်စိတ်ကိုထား
Permalink Reply by Hanni Myo Aung on December 17, 2011 at 11:39pm ဒီထဲမှာဘဲ ရေးနေကြတယ် အပြင်ထွက်ပြီး လေ့လာလိုက်ပါအုန်း ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ
Permalink Reply by George JE on March 18, 2012 at 12:35pm INSULT ON BUDDHISM.
Can we do something about this blog which insulting Buddhism? If anyone know how to find out who is the blogger and how to put comment on his blog, please tell me. I would like to write in his blog. Thks